Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 59
Inona no olana atrehan'ny olana sy ny tsy fahampian'ny vahaolana mandritra ny fotoam-pamokarana mandritra ny fotoam-pitsapana?
Mba hamahana ny olana iray dia tokony tsy ho voarindra ny efitrano fisainan'ny ati-doha. Rehefa misy fanelingelenana na fanelingelenana ao amin'ny efitrano fisainan'ny ati-doha, dia voasakana na mijanona ny dinganina. Raha vantany vao nanjavona ny fanelingelenana sy ny sakana, dia voavaha ny olana.
Ny saina sy ny atidoha dia singa mandrafitra olana, ary ny asa no mety ho dingana ara-tsaina. Ny olana dia mety misy fiantraikany amin'ny vokatra ara-batana, satria inona ny fitaovana tokony hampiasaina sy ny fomba fananganana arahana amin'ny fananganana tetezana ahafahana manana fihenan-danja sy tanjaka lehibe indrindra; na ny olana mety ho avy amin'ny lohahevitra abstract, toy ny, ahoana ny fomba mampiavaka azy ary ahoana no ifandraisany amin'ny fahalalana?
Ny olana ara-batana dia ivelan'ny saina; fa raha mandinika ny habeny, ny loko, ny lanja, ny saina dia antsoina hoe milalao ary manampy ny saina amin'ny famahana ilay olana. Ny vahaolana ny olana na ny ampahany amin'ny olana izay tsy ara-batana dia dingana ara-tsaina izay tsy ahitan'ny saina, ary aiza ny fihetsika izay hanelingelina na hanakana ny saina tsy hamaha ilay olana. Ny ati-doha dia toerana fivorian'ny saina sy ny sain-tsaina, ary eo amin'ny olana momba ny ara-batana na manaitaitra dia miasa tsara ao amin'ny atidoha ny saina. Nefa rehefa miasa ny saina amin'ny olana momba ny foto-kevitra abstract dia tsy voahaja ny saina; na izany aza, ny zavamaniry ivelan'ny tontolo dia hita taratra amin'ny alàlan'ny tsapan'ny ati-doha ao an-tsaina ary misy manelingelina na manelingelina ny saina amin'ny asany. Raha vantany vao afaka mitondra ny fahaizany mandinika tsara ilay olana ny saina, dia manelingelina ny fikorontanana ivelany na ny eritreritra izay tsy ampanahy, fa ny vahaolana ao anaty ati-doha dia hita avy hatrany.
Amin'ny ora fifohazana dia misokatra ny masony, ary ny fijery sy feo ary tsy manaitra ny maso avy any ivelany dia mihitsoka tsy an-kijanona ao amin'ny efitra fisainana ao anaty ati-doha ary manelingelina ny asan'ny saina. Rehefa mikatona amin'ny tontolo ivelany ny vavahadin-tsaina, rehefa mandritra ny torimaso izy dia tsy voasakana ny saina amin'ny asany. Saingy ny torimaso matetika dia manapaka ny saina amin'ny sainam-panahy ary mazàna manakana ny saina tsy hamerina ny fahalalana ny zavatra nataony fony mbola tsy nifandray tamin'ny eritreritra. Rehefa tsy avelan'ny saina mandalo olana, dia miatrika izany olana izany raha avela amin'ny saina mandritra ny torimaso, ary ny vahaolana entiny dia averina ary mifandraika amin'ny tsinain'ny mifoha.
Ny iray amin'ny torimaso dia efa namaha olana izay tsy voavahany tamin'ny fotoana fohazana dia midika fa efa tao anatin'ny torimaso ny sainy ny zavatra tsy vitany raha mifoha izy. Raha nofinofiny ny valiny dia mazava ho azy ny momba ilay zavatra. Amin'izany toe-javatra izany, ny saina, tsy namelana ilay olana, dia nanatontosa ny nofinofy izay nieritreretan'izy ireo raha nifoha; Ny fanjohian-kevitra dia nafindra avy amin'ny fahatsapana mifoha any ivelany ka hatrany amin'ny eritreritra nofinofy ao anaty. Raha tsy mifantoka amin'ny zavatra mahatsiravina ny lohahevitra, tsy ho nofy ny valiny, na dia amin'ny torimaso aza dia mety tonga eo ilay valiny. Na izany aza dia tsy mahazatra ny valiny ny olana atniny na ho tonga amin'ny torimaso.
Ny valin'ny olana dia mety ho tonga amin'ny torimaso, fa ny valiny dia matetika tonga mandritra ny fotoana raha toa kosa ny saina dia mifandray indray amin'ny fahatsapana mifoha, na rehefa avy mifoha. Ny valin'ny olana misy eo amin'ny natiora dia tsy azo tanterahina, satria ny eritreritra dia ampiasaina amin'ny nofy ary ny fahatsapana manelingelina na misakana ny fisainana tsy mihetsika. Raha toa ny saina amin'ny torimaso ary tsy manonofy dia mamaha olana, ary ny valiny dia fantatra rehefa mifoha ilay lehilahy, dia ny saina no toa mifoha amin'ny fotoana fohy raha tonga ny valiny.
Tsy ao anaty torimaso ny saina, na dia tsy misy nofinofy na fahatsiarovana ny hetsika ara-tsaina. Saingy ny asan'ny saina amin'ny torimaso, ary na dia tsy manonofy aza, dia tsy azo ampahafantarina amin'ny fomba mifoha, satria tsy nisy tetezana naorina teo anelanelan'ny toeran'ny saina sy ny toeran'ny fifohazana na fahatsapana nofinofy; na izany aza, ny iray dia mety handray ny valin'ireo hetsika ireo amin'ny endrika tsy manaitra ny hetsika. Ny tetezana vonjimaika eo anelanelan'ny fanjakana ara-tsaina sy saina no noforonin'izay mitory mafy dia mafy ilay olana ifantohan'ny sainy rehefa mifoha izy. Raha efa nampihatra tsara ny sainy tamin'ny ezaka nataony izy mba hifantohana ny olan'ny olana raha mbola mifoha dia mbola hitohy ny ezaka ataon'izy ireo, ary ho torimaso ny torimaso ary hifoha izy ary hahatsiaro ny vahaolana, raha nahatratra izany mandritra ny torimaso.